Varotra antsinjarany: Eto anio, Eto rahampitso
Home » Lahatsoratra farany farany » fiantsenana » Varotra antsinjarany: Eto anio, Eto rahampitso
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • fiantsenana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Anna Marie Wirth (1846–1932)
Miantsena daholo izahay. Na aiza na aiza onenanay, na inona ataontsika na ahoana no anaovantsika azy dia mila "entana" isika ary ny fomba tokana ahazoana azy (fohy ny fampitomboana ny tenantsika) dia ny mividy azy (na misy olona mividy azy ho antsika). Noho izany, na asa vitantsika na atolotray, amin'ny faran'ny andro - dia "fiantsenana. "
Telo tapitrisa ny sandany
Tamin'ny taona 2017, ny indostrian'ny varotra amerikana dia namorona 1.14 tapitrisa tapitrisa dolara nampiana sanda ary namorona asa 4.8 tapitrisa izay lasa 5.9 isan-jaton'ny vokatra anatiny amerikana. Ny sokajy lehibe indrindra? Automotive, mitentina 212 miliara dolara; ny fivarotana enta-mavesatra dia nahazo ny toerana faharoa, $ 167 miliara; ny varotra ankapobeny dia tonga tamin'ny laharana fahatelo tamin'ny $ 161 miliara. Ny indostria koa dia manohana $ 1.5 trillion amin'ny sehatry ny ambongadiny, mandray $ 2.2 trillion amin'ny alàlan'ny indostria mpamokatra amerikana.
Ny sehatry ny varotra haingana indrindra dia ny e-varotra ary amin'ny taona 2020 dia antenaina hahatratra $ 523 miliara, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana 9.32 isan-taona. Amin'ny taona 2020, mpivarotra miisa 270 tapitrisa no hampiasa ny fitaovany finday hikarohana sy hividy vokatra (tamin'ny 2015 dia 244 tapitrisa fotsiny io isa io).
Requiem amin'ny fivarotana lehibe
Tamin'ny taona 2018 dia nanapa-kevitra ny tale jeneralin'ny JC Penney teo aloha Mike Ullman fa ny 25 isan-jaton'ny magazay miisa 1200 any Amerika no ho tafita velona ao anatin'ny dimy taona manaraka. Tamin'ny taona 2018, ny mpivarotra dia nanao fangatahana bankiropitra tamin'ny taha ambony ary nahitana an'i Nine West, Claire's ary ny Toys R Us.
Araka ny voalazan'i Rick Caruso, mpamorona ny The Grove Mall (Los Angeles), "Ny foibe fivarotana an-trano dia fanaingoana izay hitohy tsy hahomby satria tapaka amin'ny fomba tian'ny olona hiainana ny fiainany izany." Ny mall dia mijanona ho toy ny fanangonana mpivarotra amidy miaraka amina safidy fisakafoanana sy fialamboly vitsivitsy.
Ireo mpandrindra ny mall dia tsy maintsy tsy nahita ilay memo nahitany fa te-hiditra an-tsehatra manokana ny olona ary hikaroka "traikefa" amin'ny fividianana vokatra avy amin'ilay hetsika. Tsy maintsy mitady fomba hamporisihana sy handrisihana ny olona handany fotoana amin'ny habakabaka ilay mpamorona foibe amin'ny alàlan'ny famoronana traikefa tian'ny olona hankafizany.
Fangaro: fialam-boly, asa ary fiantsenana
Mba hanesorana ireo toeram-pivarotana lehibe ho an'ny fiainana, dia nanoro hevitra i Oliver Chen (Cowan sy Company):
Ataovy mora ny miantsena. Esory ny fikorontanana amin'ny fiantsenana (eritrereto ny fakana fiara Amazon sy Walmart).
Miezaha hifanaraka amin'ny famoronana kolontsaina ahafahan'ny olona mifanerasera.
Ny fampidirana / fanatsarana ny habakabaka amin'ny magazay dia mety ahitana tranomboky, tranombakoka, fiarahamonina manan-tantara, efitrano fivoriana ho an'ny vondrom-piarahamonina, efitrano fianarana oniversite, fiofanana arak'asa, birao ho an'ny masoivohom-panjakana sy olom-boafidy ary fotoana mety hiadian-kevitra amin'ny forum sy dinika ho an'ny daholobe.
Ny habaka dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy tobim-pahasalamana, serivisy ara-pitsaboana sy nify, ary koa kianja fisakafoanana mahasalama miaraka amin'ny fivarotana enta-madinika misy safidy amin'ny toeram-piompiana sy latabatra fandrahoana ary divay / fanahy.
Ny fikarohana dia manondro fa ny ho avin'ny fiantsenana dia omnichannel. Amin'izao fotoana izao, efa ho ny 90 isan-jaton'ny fiantsenana rehetra dia vita amin'ny magazay miaraka amin'ny varotra an-tserasera mahatratra eo amin'ny 10 isan-jaton'ny varotra antsinjarany, izay manondro mazava ny toerana fitomboana.
Mbola lavitra ny fivarotana antsinjarany. Amin'izao fotoana izao dia misy trano fivarotana 1 tapitrisa mahery manerana an'i Etazonia, ary ny varotra antsinjarany dia nitombo teo amin'ny 4 isan-jato isan-taona hatramin'ny 2010.
Mpivarotra maro no mikatona raha ny hafa kosa manitatra. Nanokatra fivarotana vaovao 23 i Costco tamin'ny 2015 ary toeram-pivarotana vaovao 31 no kasaina hatao (17 any Etazonia). Manampy fivarotana 900 ny Dollar General, ary manokatra toerana vaovao ny Dollar Tree, Family Dollar, Aldi, Lidl, Five Below ary Hobby Lobby. Araka ny Business Insider dia fivarotana vaovao 2100 no hisokatra amin'ny taona ho avy.
Ny tatitry ny vondrona IHL, ny Transformation Radical an'ny Retail, dia nanapa-kevitra fa isaky ny fanidiana fivarotana dia fivarotana vaovao roa no hisokatra. Ny sokajy sakafo, zava-mahadomelina, mora ary mpivarotra / trano fitobiana dia nitatitra orinasa 3.7 nanampy fivarotana vaovao isaky ny nikatona. Nanapa-kevitra ny IHL fa ny fivarotana dia hiditra amin'ny 81 isan-jaton'ny varotra antsinjarany rehetra amin'ny 2021.
Ny taranaka tsirairay dia samy manana ny fizotrany miantsena. Ny Generation Z sy ny Millennial dia mety hitohy amin'ny fomba nentim-paharazana; na izany aza, ireo Millennial dia mety hahatsapa ho sorena amin'ny endrika fiantsenana mitovy / mitovy ary mitady traikefa vaovao. Ny Generation X sy Baby Boomers dia sahirana amin'ny rafitra fiantsenana / fividianana ary koa ny traikefa taorian'ny fividianana (izany hoe ny fanoratana famerenana, fiverenana).
Manantena ny mpanjifa hivaha sy hamaha / hanafoana ireo teboka fanaintainana. Ny mpivarotra (indrindra ny Millennial) dia manantena ny marika hanolotra teknolojia mandritra ny traikefa fiantsenany, izay manala ny tombantombana amin'ny traikefa mialoha ny fividianana.
Mba hisarihana ny mpanjifa vaovao eo am-panaovana ny zokinjokiny dia tokony hiditra amin'ny zavatra ataony sy ny fomba fanaovany izany ny mpivarotra.
Mpivarotra lohateny: Hevitra hodinihina
Fananana tsy miasa. Avy amin'ny habakabaka sy ny lisitra ka hatramin'ny asa sy teknolojia, be loatra ve ny fako ao amin'ilay rafitra
Very ny fikasihan'ny olombelona. Ankasitrahana ve ny mpanjifa? Isaorana ve izy ireo noho izy ireo nanokana fotoana tamin'ny fiainany be atao nandany ny volany tao amin'ny fivarotanao, nividianany ny varotrao?
Marika fanimbana sy manelingelina ny mpanjifa. Mampiasa doka pop-up ve ianao ao anaty tantara iray, manelingelina ny famakiana mpanjifa mety hitranga? Milaza tantara sa mameno habaka fotsiny ve ny doka amin'ny bisy sy metro ary takelaka lehibe?
Tahotra (tsiambaratelo sy filaminana). Sosotra ny mpiantsena rehefa mandefa doka mailaka ho an'ny kiraro na fitsangatsanganana any Frantsa ny algorithm, rehefa avy nividy kiraro izy ireo ary nanao ny famandrihan'ny seranam-piaramanidina. Tsy mampientanentana ny mijery ireo orinasa mbola tsy naheno momba ny fanatonana ny angon-drakitra manokana sy ny famaritana ny zavatra tadiaviny sy ilainy.
Asehoy ny mpanjifa karakarainao
Ireo mpanjifa dia mitady ny traikefa fiantsenana tsara indrindra ary tsy miraharaha anao, ny marika na ny fivarotanao (na amin'ny endrika inona na toy inona). Ireo mpivarotra antsinjarany dia mila mivezivezy sy mahay mandanjalanja, vonona ny hirotsaka an-tsokosoko amin'ny mpanjifa isaky ny misy na aiza na aiza no misy ny mpanjifa. Ireo mpivarotra antsinjarany dia tokony hanao antsitrika lalina ao amin'ny tahiry mpanjifany, ary hamolavola ny traikefa mifantoka amin'ny mpanjifa, hanangana ny tsy fivadihana amin'ny taonan'ny mpanjifa matanjaka.
Anjaranao mpivarotra no mamorona traikefa tsy misy tohiny fa tsy mifantoka amin'ny endri-javatra. Azo atao izany amin'ny fandinihana:
Multichannel mividy traikefa amin'ny alàlan'ny fampivoarana traikefa amin'ny mpivarotra e-varotra mahomby sy fandefasana haingana izay milamina.
Ny fampifangaroana amin'ny fivarotana an-tserasera sy ivelany amin'ny alàlan'ny fampitahana ny safidy an-tserasera, ny fividianana an-tserasera ary ny fakana am-pivarotana na ny fampiasana ireo mpivarotra mandrisika hampiasa ny finday avo lenta mba hijerena ny vidiny mandritra ny fivarotana ary vonona ny hifanakalo hevitra momba ny safidy momba ny vidiny (na hanazava ny paikadim-bidinao).
Ny fikarohana nataon'ny Price Waterhouse Cooper dia nahatsikaritra fa ny 73 isan-jaton'ny mpividy dia milaza fa ny traikefa marika tsara dia mpamily fototra ao ambadiky ny fanapaha-kevitr'izy ireo mividy. Mety hifanaraka amin'ny mpividy vitsivitsy ny fampifanarahana ny vidiny sy ny tolotra manokana, saingy misy ny bebe kokoa amin'ny fampivelarana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa noho ny fifantohana amin'ny vidiny.
Tatitra Robbin. Radical mpivarotra antsinjarany. Programme 2019
Isan-taona, ny ekipan'ny Robin Report dia mamaritra ny andiana mpivarotra sy ny marika misy azy ireo izay mamorona fomba vaovao hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa, mamantatra ireo vokatra sy serivisy izay hahatonga ny fiainana ho tsara kokoa, azo antoka, mahomby kokoa ary / na mampiala voly kokoa. Natombok'i Robin Lewis, heverina ho mpampianatra indostrian'ny varotra, i Lewis koa dia mpanoratra, mpandahateny ary mpanolo-tsaina an'ireo mpivarotra sy indostrian'ny vokatra mpanjifa
Voaozona ny hetsika. Mpaninjara sy ny marika
Fiantsenana tsy manam-paharoa
Hunsicker dia mpanorina sy Tale jeneralin'ny CaaStle, sehatra teknolojia B2B revolisionera manome hery ny mpivarotra sy ny lamaody handray anjara stratejika amin'ny toekarena fizarana vaovao. CaaStle dia mamela ny mpivarotra hanolotra akanjo ho serivisy (CaaS) ho an'ny mpanjifany ary ny tombony azo avy amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia afaka manandrana amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fanofana (ary, angamba, amin'ny farany fananana) akanjo amin'ny alàlan'ny fidirana amina familiana mihodina isam-bolana. Ny mpiara-miasa marika dia ahitana an'i Ann Taylor, NY & Co, Express, Rebecca Taylor, American Eagle, Gwynnie Bee. CaaStle dia neken'ny Fast Company ho iray amin'ireo orinasa manerantany indrindra - 2019.
Miaraka amin'ny traikefa efa an-taonan'ny 40 taona nitarika ny fampidirana stratejika ny maritrano, ny drafitra ary ny varotra, ny varotra ary ny marika amin'ny varotra, fialamboly ary indostrian'ny fandraisam-bahiny, Roche (sy ny baoliny kristaly), mandrafitra ireo toerana / toerana hanaovana ilay traikefa farany fiantsenana.
Azontsika atao ny misaotra an'i Roche tamin'ny famoronana tontolon'ny fiantsenana ho an'i Le Bon Marche sy la Grande Epicerie ary koa ny Selfridges Group, ny tantaran'ny departemantan'i Bijenkorf (Netherlands), ny Rotterdam City Center ary ny Meadowood Resort ary ny Reserve Reserve any Napa Valley.
Roche dia mamolavola toerana manome valisoa ny mpitsidika, "Raha tonga any amin'ny magazinao izy ireo, manome anao ny fotoanany, dia mila manome azy ireo valiny ianao - toy ny toerana manintona. Ny famolavolana dia mihoatra ny fisehoan'ny zavatra iray, fa ny tenanao kosa dia tenona. ”
Ny traikefa amin'ny antsinjarany dia tokony tsy hisy fifandirana. Nanapa-kevitra ny Timmins fa ny traikefa mahomby ao amin'ny magazay dia hanome tontolo iainana ara-tsosialy, manentana, mampiala voly, mandray anjara, mety, ary ivon-toerana. Homena aingam-panahy ny habaka eo an-toerana, noforonina tamin'ny faharanitan-tsaina.
Raha misy ifandraisany amin'ny fivarotana antsokosoko dia efa hitan'i Cohen izany, nataony, nodinihiny, nampianariny na vitany. Nifantoka tamin'ny fivarotana enta-madinika izy hatramin'ny nahazoany diplaoma tao amin'ny University Columbia (1971, MBA; 1969 BS Electrical Engineering). Nandritra ny 20 taona mahery dia mpanatanteraka c-suite izy, mifandraika amin'ny Sears Canada Inc., Softlines (Sears Roebuck & Co), Bradlees Inc. ary Stores Lazarus Department. Izy koa dia nifandray tamin'i Abraham & Strauss, The Gap, Lord & Taylor, Mervyn's ary Goldsmith's Department Stores. Hatramin'ny 2006 dia mpikambana tao amin'ny mpampianatra tao amin'ny Oniversiten'i Columbia University nahazo diplaoma momba ny asa aman-draharaha izy, nampianatra fampianarana momba ny fitarihana mpivarotra ambongadiny, fototra ifotony ary kilasy master amin'ny famoronana orinasa fivarotana antsinjarany.
Olona maherin'ny 300 no nanatrika ny fihaonambe iray andro, anisan'izany ireo mpitantana indostrian'ny mpivarotra, mpamorona rindrambaiko, mpikaroka antsinjarany, akademia ary mpanao gazety.
Araka ny voalazan'i Ian Gomar, Partner, Chief Marketing & E-Com Officer, an'ny Chief Outsiders, dia misy ny ho avy amin'ny fivarotana antsinjarany. Azontsika atao ny miandrandra ny fitomboan'ny maha-izy azy, ary ny valiny haingana kokoa amin'ny filàna sy ny filan'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny algorithma sy ny fianarana ny milina, dia ho vitantsika ny hanao ny fanapahan-kevitry ny fividianana mora sy mifanaraka amin'ny fomba fiainantsika sy ny teti-bolantsika.
Nanapa-kevitra i Gomar fa ny hafatra amin'ny dokam-barotra dia hiorina amin'ny demografikan'ny mpanjifa satria fantatry ny mpivarotra ny toerana onenanay ary koa ny fomba fiainantsika, ny fikarohana ary ny fividiananay. Hifandray avokoa ny zava-drehetra, amin'izay isika afaka mahazo tombony mora foana amin'ny alàlan'ny finday avo lenta, ny haitao any an-trano, ny fiara ary ny takelaka. Ny vokatra dia halefa amin'ny hafainganam-pandeha, matetika ao anatin'ny adiny iray na, raha tiantsika, dia ho afaka haka ny entana ao amin'ny magazay izahay. Azo inoana koa fa hameno ny lanitra amin'ny fonosantsika avy any Amazon ny drôna ary angamba ny fries avy any MacDonald's ary ny fipoahana avy any Sonic.
Tsy mila mahatadidy serealy sakafo maraina ho an'ny ankizy intsony isika, na labiera ho an'ny fety poker. Ny faniriantsika mitohy dia ho voky ny serivisy miorina amin'ny famandrihana ary havaozina rehefa lany. Ny magazay dia hanana pirinty kely kokoa sy hisolo toerana ambony ny serivisy ary tsy manam-paharoa, hisolo toerana malalaka tsy feno ampiasaina feno zavatra izay tsy mila na mila olona.
Amin'ny sehatra manokana dia miandry ny hametraka ny Star Trek Replicator aho - voapetraka mba hamoronana martini tonga lafatra. Hahazo vovoka ny masinina fax, hahafahako manafidy pizza mafana miaraka amin'ny cauliflower sy ny anchovies, vonona ny hihinana rehefa latsaka ny slot.
Ankehitriny rehefa natambatra ny fialam-boly, ny asa ary ny fiantsenana, inona no hitranga manaraka? Raha mila fanazavana fanampiny, kitiho eto.
Christine Hunsicker, mpanorina ary CEO an'ny CaaStle
Kevin Roche, Global, Mpitondra ny varotra amerikana avaratra, Woods Bagot
Christopher Timmins, mpivarotra antsinjarany an'ny Intel Corporation
antsinjarany izao 20